Broccoli | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Broccoli bụ ụdị kabeeji. Nke a bụ ihe oriri bara ezigbo uru. O nwere folic acid, ígwè, eriri, vitamin C na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa maka ahụ mmadụ. Na-eto eto dị otú ahụ a storehouse nke vitamin nwere ike ịbụ na gị na saịtị. Isiokwu a na-akọwa ihe kachasị ewu ewu na nke kachasị mma maka ịkụ mkpụrụ nke broccoli.
Ojiji na ojiji nke broccoli, uru na nsogbu
Broccoli bụ onye a ma ama n'ihi nnukwu ọnụọgụ bara uru ọ nwere. A na-ejikarị ya eme ihe na nri, ma ọ chọtara ngwa ya na cosmetology. N'agbanyeghị uru dị ukwuu nke ahụ, e nwere ụfọdụ ihe ị na-eme. Ihe dị na calorie na chemical nke broccoli A na-ewere kabeeji a ka ọ dị obere kalori, ya mere ihe oriri.
Nri na owuwe ihe ubi
Taa, e nwere ọtụtụ ụzọ ị ga - esi bọrọ broccoli maka oge oyi. A na-eme ụfọdụ n'ime ha iji chekwaa ọtụtụ n'ime uru bara uru nke kabeeji, ndị ọzọ - iji kwadebe maka iji ihe ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ na efere, ma ndị ọzọ na-anọchite anya efere dị iche iche. Ụdị dịgasị iche iche ga-eme ka onye ọ bụla nwee mmekọ ịhọrọ ụzọ na-egbo mkpa ya, ohere na ọnọdụ ya.
Broccoli na-egbuke egbuke maka oyi: usoro nhazi site na ntinye na foto
A na-ewere Broccoli dịka onye na-ahụ maka kọlịflawa kacha nso - ihe oriri nwere uru bara uru maka ahụ mmadụ. O nwere nnukwu protein, ọtụtụ vitamin, amino acids na mineral, yana nnukwu eriri. Ndị ọkachamara na-atụ aro na ngwaahịa a na-eri nri nke ndị nwere nsogbu na usoro obi.